Soo ogow sifooyinka eyga Shih Tzu | Eeyaha Caalamka
Susy fontenla | | Eyda ayaa dhasha
Este eey asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha Waa muunad yar oo ku guuleysata qof walba muuqaalkiisa qurxoon iyo dabeecaddiisa wanaagsan. Shih Tzu waxaa loogu magac daray ereyada Shiinaha 'libaax ey', maxaa yeelay waxaa loo soo saaray inuu u ekaado libaax, in kasta oo cabirkiisu ka fog yahay libaaxa.
Waqtigan xaadirka ah waa a eey aad u caan baxay meelaha sida England oo kale. Baaxaddiisu waxay ka dhigeysaa mid ku habboon nooc kasta oo guri ah hab-dhaqankiisuna wuxuu hubiyaa kalgacalka qoyska oo dhan. Eeyadan waxay astaamo badan la wadaagaan Pekingese iyo Lhasa Apso waana kuwo caan ah.
1 Taariikhda Shih Tzu
3 Dabeecadda eyga
4 Shih Tzu daryeel
6 Maxaad Shih Tzu ugu haysataa guriga
Taariikhda Shih Tzu
Asalka saxda ah ee taranka this, sidoo kale loo yaqaan 'eyga libaax' ama 'eyga chrysanthemum'. Sida muuqata waxaa horey u jiray eeyo la mid ah sanadka VII BC sawirada la helay. Waxaa loo soo bandhigay Shiinaha intii lagu jiray boqortooyadii Tang. Tibet waxaa lagu soo barbaariyay inuu yahay ilaah Buddhist ah, muuqaalkiisa awgeed. Eeyadan ayaa lagu soo koriyey Magaalada Xaaraanta ah. Intii lagu guda jiray shuuciyadda, tan iyo eyda kale ee eyda waxay ku sigteen inay baaba'aan, maxaa yeelay waxaa loo haystay inay yihiin raaxo fasallada sare. Intii lagu jiray qarnigii XNUMX-aad, eeyahaani waxay caan ka noqdeen qaaradda Yurub, taas oo hubisay sii wadida taranka iyo inay ku faafto dalal kale. Maanta waa nooc kale oo caan ah eey oo dhan adduunka oo dhan, taas oo ku habboon guryaha yaryar sababtoo ah cabirkooda.
El Shih Tzu eygu wuu yaryahay, oo dhererkiisu yahay 26 sentimitir. Way ka yara dheer tahay intay dherer tahay waxayna bixisaa muuqaal qosol leh. Madaxiisu waa yar yahay marka loo eego jirkiisa wuxuuna leeyahay indho waaweyn iyo af gaaban. Dhegihiisu waa yar yahiin laakiin timo badan yihiin, taas oo siinaysa muuqaalka libaaxaas yar. Dhogortiisa way dheertahay, wajiga iyo jirka labadaba, marka waa inay noqotaa daryeel joogto ah. Waxay leedahay dabo dhaadheer oo gadaasha ka laabanaysa. Midabkeeda timo wuxuu leeyahay midabbo badan oo dahab, caddaan iyo bunni ah.
Shih Tzu waa eey ku habboon dhammaan noocyada qoysaska, kaas oo awood u leh inuu la qabsado dhammaan noocyada deegaanka. Labadiinaba waad ku raaxeysan kartaan guri leh beero iyo dabaq yar. Eyga wuxuu leeyahay dabeecad aad u wanaagsan dabeecad ahaan, taas oo sahlaysa in lala xiriiro. Waa eey amaah isku siiya inuu ciyaaro oo inta badan leh niyadda aad u wanaagsan marka ay timaado la joogitaanka qoyskiisa. Wuxuu noqon doonaa eey naga dhigi doonta inaan ku raaxeysto shirkadiisa maalin kasta. Markay yihiin eeyo yar yar ayaa wejigani ka dhigi karaa xoogaa nidaam la'aan.
Waa a eey caqli badan oo soo jeeda waqti dheer kuma qaadaneyso barashada amarrada. Waa nooc noqon kara xoogaa madax adag, sidaa darteed waa inaan dulqaadnaa oo aan ka sarreysiinaa wax walba oo maalinle ah oo lala la dhaqmaa si ay u wanaajiyaan dabeecadooda Waxbarashada eeyga waa mid fudud, maxaa yeelay si dhakhso leh ayuu wax u bartaa waana eey dabeecad wanaagsan leh. Haddii aan ogaanno sida loo adkeysto ka hor madax adayggiisa waqti ka waqti, waxaan lahaan doonnaa eey aad u adeecsan.
Este eey had iyo jeer waa heegan. In kasta oo uu eey yar yahay, haddana waa xayawaan ilaalin fiican leh. Waxay uga digi doontaa qoyska joogitaanka shisheeyaha waxayna noqon doontaa eey geesi ah oo diyaar u ah inuu difaaco midkiisa. Tan macnaheedu maaha inay tahay eey gardarra ah, laakiin waa mid xoog badan oo daacad ah.
El eeygu waa inuu la macaamilaa eeyaha kale iyo dadka. Waa eey dabeecad wanaagsan oo bulsheed, laakiin waa inuu weli barto la xiriirka. Way ku fududaan doontaa eygu inuu barto is dhexgalka bulshada iyo inuu la joogo carruurta iyo xayawaannada kale.
Shih Tzu daryeel
Eygan ayaa u baahan doona daryeel gaar ah khaas ahaan jaakadda. Timahiisu wey sii kordhayeen ilaa uu ahaa eey. Waa jaakad si cadaalad ah u dheer oo u baahan doonta daryeel fara badan. Waa inaad u iibsato shanlo gaar ah timaha dhaadheer ee aan kharribin ama jabin jaakadiisa. Waa in la shanleeyaa oo la kala gooyaa maalin kasta si looga fogaado guntiinnada iyo dreadlocks. Sida iska cad, hadii jaakadu dheertahay, waa inaan sii marnaa shaqo badan. Ikhtiyaar kale ayaa ah inaad timahaaga ka jarto timo jaraha si aad si fudud ugu habayn karto xilli ciyaareed. Eyga marka uu xirto timo dhaadheer, ka fogee wajigiisa, maadaama ay dhib ku abuuri karto indhihiisa.
Sus indhaha weyn waxay sababi karaan dhibaatooyin qaar, marka waa inaad ka hortagtaa timaha inay ku dhibayaan. Waa inaan nadiifinaa haddii aan aragno inay wasakh leeyihiin oo aan ka daawanno infekshannada. Afkooda gaaban sidoo kale dhibaato ayuu ku yahay iyaga, maaddaama ay dhibaatooyin la kulmi karaan markay tahay neefsashada oo mararka qaarkood xitaa ay khuuraan.
Eyga Shih Tzu waa xayawaan kaasoo caafimaadkiisu aad u wanaagsan yahay, maadaama cimrigooda cimrigoodu yahay ilaa 13 sano. Waxaa jira tiro cuduro ah oo ku dhici kara eyga, sida soo-gelitaanka, atrophy retinal-ka ama sinta dysplasia. Dhegaha dhagaha iyo timo badan ayaa sidoo kale noqon kara dhibaato u horseedda inuu ku dhaco cudurka otitis.
Su cuntada waa inay fiicnaataa inuu daryeelo jaakadiisa waana inuu jimicsi sameeyaa maalin kasta si uu u noqdo eey isu dheelitiran oo gebi ahaanba caafimaad qaba. Waxay u muuqdaan inay leeyihiin calool jilicsan, laakiin quudin tayo leh ma lahaan doonaan dhibaatooyin markay tahay quudinta.
Maxaad Shih Tzu ugu haysataa guriga
Shih Tzu eeyaha way soo jiidanayaan isla marka aad la kulanto. Muuqaalkooda xayawaannada yaryar ee cufan ayaa ka dhigaya qof walba inuu ku jeclaado isaga daqiiqadda ugu horreysa, aragti ah oo lagu xaqiijiyey dabeecad wanaagooda iyo shakhsiyaddooda ciyaarta. Waa eey ku habboon guri ay carruur leeyihiin, maxaa yeelay qof walba wuu ku raaxeysan doonaa ciyaarahooda. Waa ey eey fududahay in la tababaro oo muujinaya caqli weyn. Baaxaddiisu waxay ka dhigeysaa eeyga ugu habboon guryaha yaryar iyo dhammaan noocyada guryaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dunida eyga » Eeyaha Guud » Eyda ayaa dhasha » Shih tzu
Ingiriisiga 'ter terrier'